नेपाल, प्रभु र सनराइज बैङ्कमा कुन अब्बल ? | Ratopati
नेपाल, प्रभु र सनराइज बैङ्कमा कुन अब्बल ?
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिएको छ । बैङ्कहरुले दोस्रो त्रैमासको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेका छन् । बुधबार मात्रै (आज) वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका एउटा सरकारी बैङ्क सहित अन्य दुइ बैङ्क (प्रभु बैङ्क र सनराइज बैङ्क) को वित्तीय अवस्था यस्तो छ
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा (६ महिना) प्रभु बैङ्कको खुद नाफा१ अर्ब ५१ करोड ८६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिलो वर्ष यसै अवधिमा बैङ्कले १ अर्ब ८ करोड ५७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
बैङ्कको खराब कर्जा घटेको छ । खराब कर्जा १.०६ प्रतिशत ले घटेर २.०६ प्रतिशतमा आएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा खराब कर्जा अनुपात ३.१२ प्रतिशत थियो । वितरणयोग्य नाफा थोरै घटेको छ । बैङ्कको वित्तरणयोग्य नाफा ९९ करोड ९८ लाख ५ हजार रुपैयाँ रहेकोे छ । बैङ्कको प्रतिसेयर आम्दानी २६ रुपैयाँ ६६ पैसा पुगेको छ । यो भनेको ४ रुपैयाँ ६५ पैसा बढेको हो ।
प्रति सेयर नेटवर्थ १४७ रुपैयाँ २९ पैसा छ । बैङ्कले ब्याजबाट २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । बैङ्कको चुक्तापुँजी ११ अर्ब ३७ करोड ६७ लाख रहेको छ ।
नेपाल बैङ्कले पनि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । नाफा गत वर्षको भन्दा ०.१४ प्रतिशतकम हो । गत वर्ष बैङ्कले १ अर्ब ३५ करोड २३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
बैङ्कको वितरणयोग्य नाफा भने ०.८० प्रतिशतले घटेको छ । बैङ्कको खराब कर्जा २.८८ प्रतिशत रहेको छ । बैङ्कको प्रतिसेयर आम्दानीमा ६ रुपैयाँ २ पैसाले घटेर २१ रुपैयाँ ३७ पैसामा झरेको छ ।यसकोे प्रतिसेयर नेटवर्थ भने २५३ रुपैयाँ १८ पैसा छ । बैङ्कको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख पुगेको छ । बैकले खुद ब्याज आम्दानी पनि ८.२४ प्रतिशतले बढाएको छ । बैङ्कले ब्याजबाट २ अर्ब ९७ करोड १३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । बैङ्कको लागत (कस्ट आफ फण्ड) ३.५७ प्रतिशत छ । यो भनेको गतवर्षको तुलनामा १.६२ प्रतिशतले घटेको हो ।
सनराइज बैङ्कले ९४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत वर्षको भन्दा ०.५३ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष बैङ्कले ९४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी ११.३१ प्रतिशतले घटेको छ । बैङ्कले १ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा बैङ्कको खराब कर्जा ०.६३ प्रतिशतले घटेर १.०६ प्रतिशत भएको छ । बैङ्कको प्रतिसेयर आम्दानी २०.१ रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १४९ रुपैयाँ ६७ पैसा छ ।बैङ्कको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ४८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैङ्कको कस्टअफ फण्ड ५.१४ प्रतिशत छ । यो गत वर्षको तुलनामा २ प्रतिशतले कम हो ।
गरिमा विकास बैङ्कको ‘मेरो सेयर बचत खाता’ सार्वजनिक
मानव सेवा आश्रमलाई नेपाल एसबीआई बैङ्कको सहयोग
‘सूर्या चौरासी पूजा’ बीमा योजनाः बृद्ध, बृद्धालगायत उत्पीडितलाई सहयोग पुग्नेमा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको विश्वास
बजारमा एकाएक तरलता अभाव !